3-da ugu fiican ee garaacista pto Rotary tiller ee cagaflaha
Haddii aad turjumeyso hareeraha koorsada golfka ama aad beero dalagyo yar yar, hoe Rotary wuxuu ku habboon yahay u diyaarinta ciiddaada ugu sareysa abuurka ~ wuxuu abuuraa dhammaystirnaan siman wuxuuna u fiican yahay dalagga iyo diyaarinta cawska ~ hagaajinta wax soo saarka, iyo sidoo kale soo bandhigista.
Khibradda iyo khibradda farsamo ee injineeradayadu waxay noo suurta geliyaan inaan been abuurno oo dhoofino tiro fara badan oo taxane ah oo Xawaare Sare ah Rotary Tillers 1GN. Rotavators-yadaan waxaa si balaadhan looga isticmaalaa warshadaha beeraha si dhaqso ah loogu diyaariyo ciidda wax lagu beero iyadoo la iskugu keenayo jajabinta, beero iyo jarista. Loogu qaabeeyay si sax ah, baaxaddeenna ayaa caan ku ah qaabeynta adkeynteeda, iska caabinta daxalka iyo heerarka cimri dheelnaanta wanaagsan. Dheeraad ah, Waxaan sidoo kale hubinaynaa in rotaleydaani ay buuxiyaan heerarka warshadaha.
Saddex dhibic oo tiller tiller / 3 4 5 6 7 ft tiller tiller iibinta
1GLN taxane ah oo culeys-culus oo wareejin ah oo wata garka dhinaca, waxaa lagu dhejin karaa 25-180hp cagaf. Waxay qabataa mindiyo balaaran oo lagu dhajiyay kursiga garabka disiki, kaasoo dumin kara caws oo ku habboon dhul adag. Waxay la jaan qaadeysaa garoonka paddy iyo dhul qalalan, oo la jaan qaada naqshadaha Yurub iyo tikniyoolajiyadda Yurub, oo leh muuqaal qurux badan iyo shaqo fiican, oo jirkiisa oo dhami ka culus yahay Moodellada caadiga ah, xasilloonida sareyso, adeeg ballaaran iyo cimri dheeri.
Qashinka u kala bixi 3 dhibic oo taraafiko ah
Qalabka farqiga u leh Beeraha ayaa gebi ahaanba lagu dhejiyaa cagaf cagaf, inta lagu jiro hawlgalka, discs-yada ayaa isu rogaya si ay carrada u rogaan, gaar ahaan, waxay ku habboon tahay hawlgalka garoonka oo leh cows, caws iyo jirridaha dalagyada ama dhir, iska caabin weyn oo ciid leh dhagxaanta iyo dhagaxa, iwm. duurka dhexdeeda. Way ku wanaagsan tahay goynta cawska iyo cawska, oo ka madax bannaan cawska, ciidda ama dhagaxa, iwm. Marka loo eego qaabdhismeedka, waxaa loo qaybin karaa qaabab kala duwan oo taxanaha 1LY (T); 1LY taxane; Taxanaha 1LYX; 1LY (SX) taxane.heegga qalabka beeraha ayaa lagu rakibay geerash, inta lagu gudajiro hawlgallada, diskooyinku waxay ku wareejinayaan inay carrada u rogaan, gaar ahaan, waxay ku habboon tahay hawlgalka garoonka oo leh cows, caws iyo jirridaha dalagyada ama dhir , iska caabin carrada waaweyn iyo dhagxaan badan iyo leben, iwm duurka dhexdiisa. Way ku wanaagsan tahay goynta cawska iyo cawska, oo ka madax banaan cawska, ciidda ama dhagaxa, iwm.
Mashiinka Soocelinta Qalabka Diyaaradda Flawn Mower Lawn Mower Straw Crash Qalabka Soocelinta
Mashiinka soo noqda ee burburin kara ma kordhin karo oo keliya ciida dabiiciga ah, hagaajinta qaab dhismeedka carrada, kordhinta bacriminta carrada iyo kobcinta diyaarinta miraha abuuritaanka, laakiin sidoo kale waxay ka fogaan kartaa gubashada cawska iyo wasakhda deegaanka.
1. Ku takhasusay soo-saarka iyo iibinta mashiinka beerta in ka badan 10 sano.
3. Iyadoo la raacayo xakamaynta tayada adag iyo adeegga ugu fiican macaamiisha.
4. Waxaan bixin karnaa adeeg heer sare ah oo iib ah ka dib.
5. Ujeedadeenu: Guul-win.
6. Waxaan u qaabayn karnaa oo u soo saari karnaa mashiinno sida waafaqsan baahida macaamiisha.
Socodka mashiinka naaftada ee naaftada ahi wuxuu leeyahay qaab fudud oo is haysta, culeys khafiif ah, ayaa si baaxad leh loogu isticmaali karaa duurka kala duwan, sida dhul-beereedka yar-yar, beeraha canabka ah, beerta ubaxa, aqalka dhirta lagu koriyo gaar ahaan ku habboon dhul-buuraha.
18HP lugeeyaha cagaarka / ku soco gadaal cagafka oem
Soosaarka warshadaha FM taxanaha mowshinka PTO ee tractor
Mashiinadan dhaqaale waxay ku habboon yihiin mulkiilaha inuu xaliyo shuruudaha dayactirka dhulka.
Jaristayaasha wareejiyaha waxaa loogu talagalay adeegga lagu kalsoonaan karo iyo hawlgalka fudud.
Badbaadinta adoo isku daraya "jumbo-jumper" sida qalabka caadiga ah iyo garka galmada pin PTO driveline.
Biraha sareeya & bir la jeexjeexay oo la daweeyey muddo dheer oo adeegga ah.
Heer bir oo tayo sare leh oo heer hoose ah oo heer hoose ah oo tayo sare leh.
U xariir silsilad-ilaaliye silsilad sida qalab caadi ah iyo ikhtiyaarka silsiladda-waardiyaha hoyga ah.
Qalabka budada ah ee la dhammeeyay oo la daboolay muddo dheer & dayactir fudud.
4 × 4 Diesel Mini Tractor 4wd oo leh Cabin / Sunshade
Gawaarida afarta giraangiraha leh waa nooca bothe jiidida iyo wadista howsheeda oo dhameystiran, ay fududahay in la shaqeeyo iyo dhammaan noocyada mashiinada beeraha. Waxaa si aad ah loogu isticmaalaa beero, beero abuurka, beero, waraabinta, buufin, goynta iyo safarka iwm. Beeraha doogga, dhul qalalan, dhul oomane, iyo geedka.
12hp 15hp 18hp 20hp 2 taayirid yar oo taraafikada mini qiimaha yar ah
Gawaarida yar yar ee cusub ee leh qalab kaladuwan, waxay ku habboon yihiin bannaanka, buuraha iyo meelaha buuraha leh, oo ay weheliso aalado ku habboon oo loo heli karo qoditaanka, goosashada, goosashada, beero, bamgareynta iyo howlaha kale.